Barnwell Seremwe - Pindula, Local Knowledge
Revision as of 08:20, 25 July 2019 by Pindulaadmin (talk | contribs)
Winning ZANU-PF primary elections
Barnwell Seremwe is a ANU PF politician who represented the party Mt Darwin West constituency in Mashonaland Central Province. He won the primary elections to contest for the parliamentary seat for Mt Darwin constituency replacing former vice president Joice Mujuru who was dismissed from both party and government in December 2014.
The elections took place on the 24th of January 2015 at various polling stations in Mt Darwin. The elections were presided over by the ZANU-PF Mashonaland West provincial executive. In the primary elections, Seremwe contested against Keneddy Banda, Caleb Karima and Godfrey Tsenengamu. Seremwe was this set to contest in the by election which was scheduled to take place on 27 March 2015. The results were as follows;
Election into Palrliament
Seremwe was elected into parliament after by-elections which were held on the 27 of March 2015. He got 18 315 votes far ahead of opponents. He automatically became a member of parliament representing Mt Darwin West Constituency.
↑ , ZANU-PF Flexes Election Muscles,The Sunday Mail, published:29 Mar Mar 2015,retrieved:31 Mar 2015"
Retrieved from "https://www.pindula.co.zw/index.php?title=Barnwell_Seremwe&oldid=81000"
Last edited on 25 July 2019, at 08:20
Contributors: Leesa, Lloyd Hazvineyi, Nirana, Pindulaadmin, kani
This page was last edited on 25 July 2019, at 08:20.